Date My Pet » 12 Soso-kevitra ny hijanona Upbeat Rehefa Online Dating
Last nohavaozina: Jan. 22 2021 | 4 min namaky
Online mampiaraka mahatsapa indraindray tena hampiraviravy tànana. Mety hahatonga antsika hahatsiaro may avy, kivy ary aza mangidy. Koa ahoana no hisorohana izany, ary manao an-tserasera fa mampiaraka an-breezy traikefa sy fahafinaretana mety ho? Ireto misy soso-kevitra ho anao.
– Ekeo fa handeha hihaona be dia be ny olona an-tserasera fa tsy ho tsotra izay mitady. Izany no tsara! Tsy ampahany amin'ny fifanarahana. Aza hatao eny, raha ny tarehimarika tonga ao an-jatony (Tsy miteny aho hoe mba hanaitaitra anao izany ary mety hahatratra avo izany raha manisa rehetra e-mail). Amin'ny aterineto mampiaraka Misy be dia be ny hafatra sy miverina, ary mivoaka. Manaiky izany ka tsy manahirana anareo.
– Manana rafitra fa rehefa mifandray amin'ny e-mail sy ny fifandraisana. Izany dia hanampy anao hisorohana handoro avy ka mitoera noho ny antony. Nahazatra ahy ny manana fitsipika e-mail aho fa hampiasa ny nitady ny olona izay zatra fotsiny aho kely arakaraka ny olona nifandray aho. Fantatro izany dia azo raisina ho toy nampiseho ny maha, Raha ny marina dia fomba mahomby fotsiny mba hitantana ny dingana sy ny hijanona avo angovo. Rehefa avy nandany ora maro izay mitendry ny tonga lafatra ihany e-mail ny tsy hanana valiny (indray), ho fantatrao hoe nahoana aho no soso-kevitra izany. Afaka folders hafa koa ho izay ataon'ny olona miankina amin'ny ianao raha liana na tsia.
– Hatrany am-boalohany e-mail fohy. Tsy milaza aho akory fa hoe tsy mampihontsona ny hahafantatra ny olona, ihany fa hatrany am-boalohany e-mail fohy tsara tarehy eo am-fitiliana azy ireo. Raha rehefa maro e-mail fohy ianao dia samy mbola liana sy mampita dia afaka mandeha kely lalindalina kokoa miaraka aminy. Izany no fotsiny mba tsy handoro ka hiatrehana izany raha mahazo maro ny e-mail sy ny tombontsoa.
– Mifindra any amin'ny 'ao amin'ny olona', na an-telefaonina avy hatrany. Mazava ho azy fa fiarovana ao an-tsaina foana, ary mamporisika ny mpanjifa mba ho amin'ny tena fiainana daty haingana. Izany dia noho ny olona mety ho tena samy hafa amin'ny tena fiainana amin'ny ahoana izy ireo izay an-tserasera, ary tsy ho fantatrao mihitsy raha toa ka handeha ho mendrika ho anao mandra-hitsena azy amin'ny tena fiainana. Izao aza mandany ora maro hafatra sy miverina an-tserasera, fa raha tsy izany dia handany fotoana be dia be ny olona izay mety tsy ho mety ho anao.
– Aza manahy raha tsy mahazo valiny ho any amin'ny e-mail ianao mandefa. Raha mitranga izany ho anao Fantatro izany dia afaka mahatsapa mahatsiravina sy indray tsy manao izany manokana. Indraindray isika rehetra mandalo tsipelina maina izay mahazo TSY MISY. Tsy misy valinteny akory va ny e-mail nanirahanay, tsy misy ny fifandraisana sy ny sisa. Aza raiki-tahotra raha mitranga izany ho anao, na izany aza tsy hanenenana naka tanjona iray hafa mandinika izay efa voasoratra eo amin'ny mombamomba sy ny sary izay namoaka. Manomana ny mpamaky ny mombamomba tokony antoka ho namana, hazavana sy falifaly. Raha toa ianao ka tsy mbola manana vintana ianao indray no teny ny mombamomba, manontany ny namana itokisana mba hijery azy sy hanome anao ny fanehoan-kevitra sasany. Dia asaivo mijery ny sasany amin'ny hafatra naniraka ianao mba ho azo antoka dia mamaky OK.
– Fihadiana Toy izany koa raha toa ianao ka vehivavy ary miandry ny hahazo na inona na inona misy hafatra sy tonga amin'ny alalan'ny, indray aza manahy. Vakio ary manaraka ny dingana ambony. Ihany koa ny manamarika fa ity no faritra iray izay soso-kevitra, mety ho eo amin'ny teny hery, fotsiny noho izany dingana voalohany. Izay tiako holazaina Izany no nandeha mialoha ataovy ny dingana voalohany ka nitady ny olona sy ny hafatra tianao. Online fiarahana toerana dia mety ho tena 'mitabataba' ary afaka very tao amin'ny shuffle raha tsy ho eo anatrehanao nampahafantarina. Ampiasao ny teny hery mba hifandray ny olona, ​​ary mahazo ny rafitra eo amin'ny toerana, ary avy eo dia mitete avy hatrany eo amin 'ny Anarana hery indray mandeha ny fifandraisana dia nanomboka.
– Aza maka izany manokana raha manjavona. Efa efa isika rehetra izany hitranga. Ianao mahita olona an-tserasera, ianao Niady hevitra aminy, Tsy nandeha tsara rehetra, fananganana nicely, angamba ianao na dia miasa ho amin'ny fangatahana ny daty, ary avy eo dia tampoka 'POOF' izy ireo levona eo amin'ny rahona ny setroka, tsy mba ho hita indray. Hoy ianao no zavatra mahatsiravina? Ve izy ireo ho faty? Eny ary azo inoana fa tsy. Azo inoana kokoa ihany koa izy ireo miresaka amin'ny hafa ny olona an-tserasera, ary ny olon-kafa tonga ao amin'ny tany voalohany, na angamba ny taloha izy ireo fa mbola mangingina-pitia nampiseho indray ka tsara vintana ianao nanana afa-mandositra. Ny tanjona dia tsy dia azo inoana fa ianao mahalala. Ary izany dia mitranga ny fotoana rehetra! Raha fantatrareo izany dia manampy maka ny fanaintainan'ny izany. Toro-hevitra foana aho mpanjifa ny vehivavy tsy mba tafiditra-pihetseham-po koa mandra-raha ny marina nifanena taminy tao amin'ny tena fiainana, ary raha ny marina ambara-pahatonga azy mampiseho anao izy tena te anao. Mandra-pahatongan'izany fotoana izany izy no safidy iray monja ho anao nivoaka tamin'ny maro. Aza maka 'ny fanjavonan'ireo' manokana.
– Hitondra izany rehetra izany miaraka amin'ny fiantraikany-tsira. Online fiarahana no dia. Ary raha afaka manaiky izany ny tena marina dia hanana ny mora kokoa ny fotoana izany. Fa hahita ny sasany oddballs, fa hahita ny olona sasany izay eritreretinao fa mahatsiravina, dia hihaona angamba ny olona sasany, ary angamba tianao fa hahita olona afaka manana fifandraisana, ary raiki-pitia amin'ny. Na izany aza na inona na inona tsy izany dia, dia ho zava-nitranga. Dia hitombo ho toy ny olona noho izany, ary mahazo ny mampihatra ianao fifandrindrana amin'ireo mpikambana ao amin'ny ankizilahy na ankizivavy. Noho izany dia tsy ho ao, fotsiny ataovy azo antoka fa hitondra azy amin'ny fiantraikany-tsira, hiara-mihomehy namanao momba azy io, ary hiala voly no alehako izany teny an-dalana.